Noonogramka khadka tooska ah
Ciyaarta ayaa si toos ah lagu ogaan doonaa marka aad gaadhay xalka for xujo hadda.
Muuji qeexitaanada loogu talagalay wareega hadda: haa maya
Dheellitir sliders si xafidan cabir guddiga la doonayo:
Bilow ciyaar cusub Ciyaar casharro
[5x5] [5x10] [10x10] [15x15] [20x20] [25x25] [cabir caadadii] [sawiro]
Nonogram - Xeerarka
Ujeedada kulankaan waa in la ogaado guddi ka kooban god oo buluug ah iyo meelo bilaash ah. Waxaad samayn kartaa tan adoo eegaya qeexitaanada safka/column: isku xigxiga lambarada oo sharaxaya kooxo isku xigta oo ka muuqda isku xigta ee isku xigta/column. Tusaale ahaan, 1 5 2 macnaheedu waa hal wareeg, 5 god iyo 2 god, sidan, oo ay kala soocaan hal ama in ka badan meelaha u dhaxeeya.
Waxaad riixi kartaa god mar si aad u calaamadiso sida degan. Mar labaad riixaya iyaga ayaa ku calaamadin doona X; waxaad isticmaali kartaa calaamadahan si aad ula socoto god aad u tixgelinayso inay madhan yihiin. Riixitaanka mar kale waxay keentaa god ee gobolka asalka ah.
Nonogram ayaa sidoo kale loo yaqaan hoos magacyo kale oo badan, oo ay ku jiraan Rinjiga by lambarada, Crucipixel, Edel, FigurePic, Grafilogika, Griddlers, Hanjie, Ilaal-Logic, Crosswords Japanese, xujooyinka Japanese, Karala!, Logic Art, Logic Square, Logicolor, Logik-xujooyinka, Logimage, Oekaki-Mate, Logic rinjiga, PIC-a-PIX, Picross, Pixel xujooyinka, Shchor Uftor iyo Tsunami.